Usizo lomndeni: luyini, ungasifaka kanjani isicelo nezidingo zokukucela | Ezezimali Zomnotho
Encarni Arcoya | 22/07/2021 09:05 | Kubuyekezwe ku- 31/08/2021 11:28 | Crisis
Ukungasebenzi, inzuzo yokungasebenzi, usizo lomndeni. Kuya ngokuya kuvama kakhulu ukuthi lawa magama abe sezindebeni zakho ngokushesha nje lapho uphelelwa umsebenzi, ngoba kwesinye isikhathi ukuthola omunye kunzima kakhulu ukukuthola. Kepha, izikhathi eziningi, lamagama amabili awaziwa kakhulu; akunjalo ngokwesithathu.
Uma ufuna ukwazi luyini usizo lomndeni, Yiziphi izidingo okufanele kuhlangatshezwane nazo ukusicela, ukuthi sikwenze kanjani nokuthi kuhlanganisani, khona-ke sizokhuluma ngakho konke lokhu ukuze ukuqonde kahle.
1 Luyini usizo lomndeni
1.1 Ngabe ukuxhaswa komndeni kukhokhiswa ingunaphakade?
2 Ungasifaka kanjani isicelo somndeni sokuswela amandla emisebenzi
3 Ungasifaka kanjani isicelo sosizo uma ungenalo ilungelo lokungasebenzi
4 Kungani ngingakhokhisi ama-euro angama-451?
Luyini usizo lomndeni
Ngokuvamile, "usizo lomndeni" ukukhokha cishe ama-euro angama-451,92 ngenyanga anikezwa labo abangasebenzi abanemithwalo yemfanelo yomndeni futhi ngubani, ngoba abanawo umsebenzi, futhi baphinde baqeda umhlomulo ngenxa yokungasebenzi, noma abakwazi ukuyiqoqa, abakwazi ukuhlangabezana nezindleko abanazo.
Kodwa-ke, okuthile okwaziwa ngabambalwa kakhulu ukuthi, ngosizo lomndeni, empeleni kunezinhlobo ezimbili zoxhaso, nazo ezihlukile komunye nomunye.
Usizo olujwayelekile. Mayelana noxhaso oluqoqwa ngemuva kokuqedwa komhlomulo wokungasebenzi. Kodwa-ke, abayiniki wonke umuntu, kepha kufanele kube nokushoda kwemali engenayo ngaphezu kokuba khona kwemithwalo yemfanelo yomndeni.
Usizo olujwayelekile. Kubuye kube ngumxhaso kodwa, ngokungafani nowangaphambilini, uyakhokhiswa lapho inzuzo yokungasebenzi ingatholakali. Manje, ukuze ivunyelwe, kufanele ube nezinsuku okungenani ezingama-90 zeminikelo, ngaphezu kwezindleko zomndeni.
Njengoba ukwazi ukubona, zombili ziyefana, kepha izidingo ngokwazo zihluke ngokuphelele.
Ngabe ukuxhaswa komndeni kukhokhiswa ingunaphakade?
Cha, ukusekelwa komndeni "kunedethi yokuphela kwesikhathi." Isizathu sokuqala esingadala ukuthi lolu sizo luhoxiswe yingoba kusayinwe inkontileka yomsebenzi nomsebenzi. Ngokuhluleka ukuhlangabezana nenye yezimfuneko, okungukushoda imali engenayo, usizo luzokhanselwa ngokuzenzekelayo. Manje, lokho akusho ukuthi ngeke iphinde iqaliswe, kepha-ke, konke kuzoncika ecaleni ngalinye elithile.
Sekukonke usizo luqoqwa izinyanga eziyi-18 kuphela. Lokhu kuvuselelwa kusuka ezinyangeni eziyisithupha kuya kweziyisithupha. Kepha kukhona amacala lapho ihlala khona isikhathi eside. Ngokwesibonelo:
Abangasebenzi abangaphansi kweminyaka engama-45 benenzuzo ephelile yokungasebenzi (kepha bebeyitholile okungenani izinyanga eziyisithupha). Bazokwazi ukuthola izinyanga ezingama-6 zosizo lomndeni.
Abantu abangasebenzi abangaphezu kweminyaka engama-45 ubudala abanenzuzo yokukhathala yokungasebenzi (kodwa beyitholile okungenani izinyanga ezine). Izinyanga ezingama-4 zosizo.
Abantu abangasebenzi abangaphezu kweminyaka engama-45 abanenzuzo yokukhathala yokungasebenzi (kodwa bebeyitholile okungenani izinyanga eziyisithupha). Bangakhuphula ubude obufinyelela ezinyangeni ezingama-6 ubuningi.
Ungasifaka kanjani isicelo somndeni sokuswela amandla emisebenzi
Uma uphelelwe umsebenzi futhi ungawutholi umsebenzi, ungawuthola faka isicelo sosizo lomndeni lokuphela komhlomulo wokungasebenzi. Manje, kufanele uhlangabezane nochungechunge lwezidingo ezi:
Hlala ungasebenzi futhi ubhaliswe njengomuntu ofuna umsebenzi.
Linda inyanga. Ibizwa ngokuthi "yinyanga yokulinda", phakathi kokuphela kokungasebenzi nokucela usizo lomndeni, ukubona ukuthi ungawuthola yini umsebenzi.
Ukuba nezindleko zomndeni. Ngabantu abathembele emndenini kuyaqondakala ukuthi bayizingane ezingaphansi kweminyaka engama-26 ubudala, kodwa futhi nomlingani (uma lokhu kuncike kwezomnotho koyedwa) noma izingane ezikhubazekile.
Ukungabi nemali engenayo ephezulu kune-75% yomholo ophansi wokusebenzelana.
Uma uhlangabezana nezidingo, kufanele faka isicelo sosizo lomndeni ezinsukwini eziyi-15 zebhizinisi ngemuva kokuqeda inyanga yokulinda. Ukuze wenze lokhu, kufanele uye ku-SEPE (noma ukwenze online) bese ulinda ukuthi baphendule. Kufanele ube ne-DNI, kokubili okwakho nencwadi yomndeni kanye ne-ID yowakwakho; incwadi yasebhange lapho kuvela khona inombolo ye-akhawunti; kanye nobufakazi bemali engenayo.
Ungasifaka kanjani isicelo sosizo uma ungenalo ilungelo lokungasebenzi
Kunabantu abaningi okuthi, lapho kuphela isivumelwano sokuqashwa, bengenalo ilungelo lokungasebenzi, ngoba abanazo izinsuku ezingama-360 zokunikela. Uma lokho kwenzeka, nezinye izidingo esizibalulile ngaphambili kuhlangatshezwana nazo (abantu abathembele emndenini, abangenayo ngaphezu kwe-75% ye-SMI yemali engenayo futhi abangasebenzi), ungacela usizo lomndeni.
Kulungile manje izikhathi zokuyiqoqa zihluke kakhulu.
Uma ngabe unikele ngezinyanga eziyi-3-4-5 kuphela, futhi unabantu abondliwe ngumndeni, uzoqoqa umxhaso kuphela izinyanga eziyi-3-4-5, akusekho.
Uma unikele ngaphezu kuka-6 kodwa ngaphansi kwezinyanga eziyi-12, umxhaso uzoba izinyanga eziyisithupha uma ungenabo abantu obondlayo, noma u-6 uma wenza kanjalo.
Inqobo nje uma unikela ngaphezu kwezinyanga eziyi-12, ungacela inzuzo yokungasebenzi.
Kungani ngingakhokhisi ama-euro angama-451?
Ngaphandle kokuthi, njengoba besikutshela, usizo lomndeni ngama-euro angama-451, kunamacala amaningi lapho abantu bengakukhokhisi lokho, futhi bakhokhisa ama-euro angama-60, 120, 225 euros ... Kungani lokho kwenzeka?
Ngempela Akukhona ukuthi babenephutha ku-SEPE, kepha ukuthi kukhona "ukuphrinta okuncane" okungekho muntu okwazisa ngakho, futhi yikho okwenza usizo lwakho lube lincane yize ubhekene namacala omndeni.
Okwenzekayo ukuthi, kusukela ngo-2021, ukubala usizo lomndeni, inkontileka yokugcina oyisayinile iyabhekwa. Uma kuyisivumelwano sesikhashana noma sehora, uMbuso awukhokhi u-100%, njengoba ubukade wenza phambilini, kepha kunalokho wenza isilinganiso ngokuya ngamahora asetshenzisiwe.
Uma usebenza isigamu sosuku lokusebenza, uthola uhhafu wesibonelelo. Uma usebenza amahora ambalwa, uthola usizo oluncane. Kulula njengalokho. Ngaphambi kwalokho, lonke usizo lwalukhokhelwa uma ngabe yonke imibandela yahlangatshezwa; kungakhathalekile ukuthi ibiyini inkontileka yakho yokugcina.
Noma kunjalo, uma ucabanga ukuthi kungenzeka kube yiphutha, kungcono wenze ukubonana ubuso nobuso ehhovisi le-SEPE bese wethula udaba lwakho. Ngoba nabo bangawenza amaphutha kwesinye isikhathi.
Ngabe usizo lomndeni lucace kuwe? Ngabe unokungabaza okuthile? Sitshele futhi sizozama ukukusiza ukuyixazulula. Enye indlela ongayithatha ukuthola iseluleko ngoba, ngaleyo ndlela, ungaletha udaba lwakho bese uthola isisombululo esifanelekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Crisis » Usizo olujwayelekile